Elkhart Aframe - **Uluhlu olutsha**
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguErin
I-Elkhart Aframe yindawo efanelekileyo yomntu ofuna i-adventure ofuna amava akhethekileyo kunye nabucala asele ekufutshane nawo wonke umsebenzi. Ikhaya lihlala kwindawo enemithi eneehektare ezintathu zabucala kuphela umgama oziikhilomitha ukusuka kwilali yase-Elkhart Lake, iNdlela yaseMelika, kunye neZikhosi zeGalufa. Le ndlu yahlukile yakhiwe ngeminyaka yee-1970 kodwa isandula ukulungiswa ngobumnandi bale mihla baseScandinavia. Inazo zonke izibonelelo zeholide ekhumbulekayo yokuhlala ebonelela ngamathuba amaninzi eepic.
Mna nomyeni wam uPatrick sayibona le Aframe kwi-intanethi ekwindla ka-2019 kwaye kwangoko sayithanda. Ulwakhiwo olukhethekileyo, ingaphakathi elihlaziyiweyo, kunye nemithi ejikelezileyo (eneyona mibala imangalisayo yokuwa), idityaniswe nendawo egqibeleleyo yenze ithuba lokuba singakwazi ukuliyeka. Ngelixa besisoloko sinombono wokuyirenta kwi-AirBNB, sagqiba ekubeni sithathe isigqibo sokufudukela kuyo kule minyaka iyi-1.5 idlulileyo kwaye sikhule siyithanda ngakumbi. Sichithe iminyaka eli-12 edlulileyo sihlala kunye ePortland, e-Oregon (ilizwe lam lasekhaya), siyayithanda idolophu encinci kodwa siziva sinenkqubela phambili ye-Elkhart Lake kwaye sonwabele ukufikelela lula ngaphandle. Xa singasebenzi endlwini okanye kumhlaba, siyakonwabela ukubheqa kwi-Crystal Lake (akukho Cawa yokuvuka siyithandayo), sinyuka indlela eya kwindlela ye-Ice Age, singena elalini ukuze sifumane ukutya neziselo kwaye sive bukhoma. umculo, ukuya kwiMarike yoMlimi wangoMgqibelo, ukubukela iintlanga kwiNdlela yaseMelika, ukuhamba ngebhayisikili kwindlela, kunye nokufikelela kwiindlela zeGreenbush Kettle Moraine zokunyuka, ukuhamba ngeentaba, kunye ne-skiing. Siyithanda kakhulu le ndawo kangangokuba sithenge elinye ikhaya ezantsi kwendlela esingena kuyo ukuze sikwazi ukuzalisekisa iphupha lethu lokuvumela abanye ukuba benze iinkumbulo kwaye bachithe ixesha kule ndawo incinci yokubuyela kwendalo esiyibiza ngokuba #ElkhartAframe. Siyathemba ukuba uya kuyithanda njengokuba sisenza.
Ikhabhathi epholileyo enesilingi ye-aframe kunye nezinyuko ezijikelezayo ezahlula amanqanaba aphezulu nasezantsi. Igumbi lokulala elikhulu elinebhedi ekhululekileyo yokumkanikazi kunye nekhabhathi enkulu ibekwe phezulu, kunye ne-TV eyahlukileyo, enesofa egobileyo. Ikhitshi, igumbi lokuhlambela eligcweleyo (ishawari), igumbi lokuhlala, (amawele) igumbi lokulala, kunye nendawo yokutyela encinci ibekwe kumgangatho osezantsi. Idesika enkulu ejikelezileyo enefenitshala ye-hip patio kunye neeplanti zonyaka kunye nendawo enkulu yomlilo iyandisa kakhulu indawo yokuhlala ehlotyeni. Ukulungiswa komhlaba kobuchwephesha kunye neegadi zemvula zihlala zivela kwipropathi ngokunjalo. I-WiFi elungileyo iyafumaneka kuyo yonke indlu/idesika kwaye ungangena kwiNetflix, kwiAmazon Prime, kunye nezinye iiakhawunti zenkonzo yokusasaza ngeTV enkulu enenkcazo ephezulu. Siye sagqiba kwelokuba sigcine urhumo lwentambo ye-ATT luza kuwe. Le ndawo ifaneleke kakhulu abantu abadala ababini okanye abathathu, enobuninzi obuhlala abantu abahlanu.
Igcwele ngokupheleleyo iimfuno zokupheka, ifriji egcweleyo, i-microwave, i-French press, igrinder yekofu, i-toaster, i-blender kunye ne-cooktop / i-oveni. Ukucoca kulula kunye ne-dishwasher eyakhelwe-ngaphakathi; isicoci sikhona.
Igumbi lokuhlambela elinye elikhulu elineetawuli, amalaphu okuhlamba, ishampu, isepha kunye nesomisi seenwele. Igumbi lokuhlambela impahla elikumgangatho osezantsi linewasha kunye nesomisi esipheleleyo. Ezinye iincwadi kunye nemidlalo yebhodi nazo zibonelelwe.
Iindwendwe zethu ziya kuvuyiswa kukufunda ukuba sisandula ukuba neeyunithi ezimbini zokufudumeza / zokupholisa ezifakwe kwi-Elkhart Aframe. Enye kwigumbi lokulala elikhulu kunye nenye ekhitshini ke oku kufuneka kwenze phakathi ehlotyeni kuhlale kumnandi kuwe! Ngelixa iiyunithi zomoya ezahlulahlulayo zikwasebenzela ukufudumeza xa amaqondo obushushu engaphezulu komkhenkce, sikwanayo nebhodi yokufudumeza yombane kunye neefeni eziphathwayo kuyo yonke indawo.
Indlela yokuqhuba (iimoto ezi-5). Qaphela ukuba i-driveway inemithi kwaye inomoya omncinci, okwenza kube nzima ukufumana ii-RV / iitreyila ezinkulu.
Ijikelezwe yimithi macala onke ebonelela ngemfihlo, kukho umgangatho omkhulu, iyadi ebanzi, kunye nomgodi womlilo ukuze ukonwabele kwiinyanga zasehlotyeni.
INDLELA AMERICA INGxolo
Ngelixa indawo iziva iyimfihlo kakhulu, ukusondela kwethu kwiNdlela yaseMelika kuthetha ukuba i-buzz yeenjini ezibalekayo zijikeleze umzila zinokuvakala kwi-Aframe xa ugqatso lusenzeka (ngokuqhelekileyo ngeempelaveki zasehlotyeni). Ukuba oko kukuxhalabisayo, unokufuna ukujonga ishedyuli ye-Road America kunye nencwadi ngexesha ngaphandle kweentlanga. Kwelinye icala, sixelelwe ngabalandeli bomdyarho ababhukisha indawo ukuba bayasithanda isandi kunye nento yokuba bebekufutshane nentshukumo.
Kwidolophu yase-Elkhart Lake iivenkile zokutyela, iivenkile, kunye neMarike yangoMgqibelo-i-1.5 yeemayile kude
Indlela yaseMelika - iikhilomitha ezi-2 kude
I-Fireman's Park Public Beach-i-0.9 yeemayile kude
Yeka iKhosi yeGalufa ye-Qui Oc-imayile enye kude
I-Whistling Straights Golf Course (kunye nabanye) - iimayile ezili-15 kude
I-Kettle Moraine National Forest Greenbush UkuHamba, ukuHamba ngeBhayikhi eNtabeni, kunye neeNdlela ze-Ski ezinqamlezileyo-iikhilomitha ezili-9 kude
Ukufumana izindululo ezithe vetshe malunga nezinto ezenziwa ekuhlaleni, nceda ujonge incwadi yethu yesiKhokelo ye-AirBNB okanye uqhagamshelane nemibuzo.
I-Aframe ibekwe ecaleni kwendlela yabucala yegrabile kwindawo enemithi entle eziva ibucala kwaye ingasese kodwa imalunga neekhilomitha ukusuka edolophini nakwiNdlela yaseMelika.
Sihlala kanye ezantsi kwendlela kwaye ngamanye amaxesha siya kuma sisebenze okanye sikhuphe izinto kwigaraji ekwisiza okanye sisuse inkunkuma ngoMgqibelo. Ngokuqhelekileyo asinxibelelani neendwendwe ngokobuqu ngaphandle kokuba ngamabona-ndenzile.
Samkela BONKE abakhenkethi abanentlonipho kuquka LGBTQIA+ kunye/okanye iPOC.
Sihlala kanye ezantsi kwendlela kwaye ngamanye amaxesha siya kuma sisebenze okanye sikhuphe izinto kwigaraji ekwisiza okanye sisuse inkunkuma ngoMgqibelo. Ngokuqhelekileyo asinxibe…